News - Bandhiggii 12-aad ee Shanghai International Electric and Electrician Exhibition
Waxaa la aasaasay 1986, EP waxaa soo abaabulay Golaha Korontada Shiinaha, Shirkadda Dhismaha ee Shiinaha iyo Shiinaha Koonfurta Korantada Korantada, oo ay si wada jir ah u abaabuleen Shirkadda 'Adsale Exhibition Services Ltd', oo ay si buuxda u taageereen dhammaan shirkadaha waaweyn ee Power Group iyo Shirkadaha Power Grid. In ka badan 30 sano oo rikoodh guul iyo khibrad leh, waxay noqotay bandhigii korantada ugu weynaa uguna sumcadda badnaa ee ay ansaxisay UFI Approved Event ee Shiinaha waxaana si weyn u aqoonsaday hoggaamiyeyaasha suuqyada adduunka iyo ururada ganacsiga caalamiga ah.
Bishii Nofeembar 6-8th 2019, xafladda weyn ee warshadaha awoodda sanadlaha ah waxaa lagu qabtay Shanghai New International Expo Center (Hall N1-N4). Bandhigu wuxuu abuuray lix goobood oo gaar ah oo lagu soo bandhigayo: Internetka tamarta, aaladaha wax soo saarka caqliga badan, otomaatiga korantada, gudbinta iyo joojinta hal-joogsiga, xaaladaha degdegga ah ee badbaadada awoodda, ilaalinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka In kabadan kun magac hoggaamineed oo ah noocyada qalabka korontada iyo korontada ee gudaha iyo dibedda ayaa si buuxda u muujinaya horumarka cusub ee suuqa korontada ee dhinacyada kala duwan.
Bandhiggan, shirkadeena, oo ay hagayso fikradda bixinta qorshe cusub oo hirgelinta koronto siinta korantada, oo ay weheliso hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda sanadkii la soo dhaafay, ayaa billowday tiro qalab cusub ah, oo ay ku jiraan qalabka xarunta farsamaynta bar naxaasta CNC, nidaamka adeegga cusub, qashin qubka baska iyo tikniyoolajiyadda ubax-qalooca ee qalabka gudbinta iyo qaybinta, kuwaas oo ay doorbidaan inta badan dhagaystayaasha.